Momba anay - Shijiazhuang Manfre Filter Co., Ltd.
Topimaso an'ny orinasa
Niorina tamin'ny 2007, Manfre sivana dia iray amin'ireo orinasa an-trano voalohany indrindra amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana betsaka ny vokatra filtration indostrialy isan-karazany any Shina.
Nekena ho orinasa teknolojia avo lenta izy tamin'ny 2012 ary nandalo ny rafitra kalitao ISO9001, rafitra fitantanana tontolo iainana ISO14000, rafitra fitantanana fiarovana sy fiarovana ara-pahasalamana OHSAS18000, ary rafitra fitantanana fananana ara-tsaina GB / T29490-2013.
Manfre dia orinasa iraisana izay manampahaizana manokana amin'ny sivana indostrialy. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny sivana labozia vy tsy misy fangarony, sivana kapila ravina, sivana fonosana ary sivana vy voadio, fanesorana zavona ary fantsom-bovoka sy sivana vovoka, sivana solika, sivana rano, fitaovana fitsaboana rano sns ... Ampiasaina betsaka amin'ny solika sy gazy, simika indostria, fibre simika sy lamba, metallurgy, pharmaceutika, herinaratra, herinaratra, fitsaboana rano, sakafo sy zava-pisotro sns. ny sivanay dia aondrana any Etazonia, Peru, Mexico, Canada, Italia, France, Turkey, Pakistan, Middle East, Azia atsimo atsinanana, manodidina ny 80 tany manerana an'izao tontolo izao.
Ny teknolojia dia fanahin'ny orinasa iray. mandray ny haitao fandrosoan'ny Korea mandroso izahay ary manangana ny ekipanay tarihin'ny injeniera teknika Koreana, izay manampahaizana manokana amin'ny filtration apetraka. Izy io dia mitazona ny vokatra vokariny amin'ny sehatry ny filtration. Ny singa fototra — FILTER MEDIA dia avy any USA, Japan, Europe, ary nanangana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo mpivarotra media sivana ambony.
Ny tanjonay dia ny hanome ny teknolojia fandrosoana mandroso sy ny vahaolana amin'ny fampiharana tsy tambo isaina, fiarovana ny fahasalamana, fiarovana ny fananana miasa mafy, fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, ary ny fihenan'ny emissions sy ny fako.
Manokana ny tenantsika isika mba hahatonga ny lanitra hihamamiratra kokoa, ny rano madio kokoa, ny tendrombohitra maitso maitso, ary ny olona salama kokoa.
Manfre dia mpiara-miasa voaporofo manome filtration, fisarahana ary vahaolana fanadiovana hahafeno ny filan'ny mpanjifa manerantany. Izahay mpiara-miasa eran'izao tontolo izao dia mitambatra amin'ny fiara tokana: hamaha ireo olana lehibe amin'ny filtration, fisarahana ary fanadiovana lehibe indrindra. Ary, amin'izany, mandroso ny teknolojia momba ny fahasalamana, fiarovana ary ny tontolo iainana.
Album an'ny orinasa